🥇 ▷ 8 siyaabood oo lagu hagaajiyo asturnaanta iPhone ✅
8 siyaabood oo lagu hagaajiyo asturnaanta iPhone
Dejinta gaarka ah ee IPhone
Asturnaanta waa mid ka mid ah welwelka weyn ee dadka isticmaala iPhone. Taasi waa sababta TodoiPhone.net aan ugu diyaarinay hage yar oo leh 8 meelood waad beddeli kartaa si aad u ilaaliso macluumaadkaaga iyo asturnaanta qalabka.
Haddii aad qof weydiiso haddii ay jeclaan lahaayeen in howlahooda oo dhan la kormeero, waxay u badan tahay inay kuu sheegaan maya. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah dejimaha iPhone ee caadiga ah ayaa loogu talagalay inay diiwaan geliyaan goobteenna iyo waqtiyada maalinta aan qabanno howlo qaarkood.
Ogaanshaha iyo xogta isticmaalka
Si loo hagaajiyo badeecadaada, Apple waxay aruurisaa xogta iPhone si loo ogaado barnaamijyada iyo howlaha ugu badan ee loo adeegsado. Haddii aadan rabin in dadka reer Cupertino ay ogaadaan sida loo isticmaalo iPhone-kaaga, waad ka takhalusi kartaa cilad-baarista waxaadna adeegsan kartaa xulashooyinka Guud> Qarsoodiga> Baadhitaannada oo aad adeegsan kartaa. Xullo doorashada Ha dirin oo tag.
Sawirro gogol-dhaaf ah
Calaamadda sawirrada juquraafi ahaaneed waa cabbir ay isticmaaleyaashu qaarkood jecel yihiin. Waxay iloobaan inay sheegaan meesha ay joogeen oo u oggolaadeen kaamiradda lafteeda inay sameyso, si kastaba ha noqotee waa hab lagu dabagalo howlaheena. Waad ka joojin kartaa shaqadan barnaamijyadeeda> Goobta. Xulo arjiga Kaameerada oo xulo marna xulashada si sawirada si otomaatig ah loogu calaamadiyo goobtaada.
Markii aad xayeysiis u hesho dukaannada ama adeegyada u dhow meesha aad ku sugan tahay, waa sababta oo ah Apple Diiwaangeliso meesha aad ku taal khariidada oo waxay kugu ogaysiineysaa dukaamada ama meelaha laga yaabo inaad xiiso u hesho. Waxaad sidoo kale kaafaajin kartaa tan Eto’da> Goobta> Adeegyada Nidaamka, halkaas waxaad ka baabi’inaysaa iAds marka loo eego goobta oo aadan walwal walwal qabtid.
Meelaha soo noqnoqda
Sidoo kale way fiicantahay inaad joojiso u gudbinta macluumaadka Apple wax ku saabsan meelaha aad joogto, sidaa darteed u gudub Settings> Goobta> Adeegyada nidaamka iyo qaybta Horumarinta alaabada Dami astaamaha Goobaha Soo noqnoqda.
Xayeysiinta waxaa loo isticmaalaa si ay ula socdaan wax kasta oo aan sameyno oo aan ku bixinno xayeysiin la xiriira. Tag goobaha Tilmaamaha> Qarsoodiga> Xayeysiinta oo aad dhaqaajiso xulashada Xaddididda Xaddididda. Xulashadan waa in lagu hawl galaa si loo yareeyo tirada xayeysiinta ee nooga imaanaysa iyo macluumaadka Apple ay ka hesho dhadhamadeena.
Ka fogow raad raacista Safari
Bogga internetka ee Safari wuxuu kaloo keydiyaa qaar ka mid ah xogta socodka, laakiin waxaan u habeyn karnaa inaan joojino sidaas. Qaybta> Safari> Qarsoodiga iyo amniga, ku dhaqaaq ikhtiyaarka oranaya Ha Raadin. Waxa kale oo ay u adeegtaa si loo xakameeyo pop-up-ka.
Barnaamijyada la soo jeediyay
Xeerarka> iTunes & App Store waad ka hortagi kartaa soo jeedinta dalabka, tani waxay ka hortageysaa Apple waxaan kugula talinayaa barnaamijyada ku saleysan isticmaalka aad siiso aaladda iyo barnaamijyada aad inta badan u isticmaasho.
U habeyn marin-u-helka qalabkaaga aaladda
Markii aan rakibno barnaamij, waxay naga codsanaysaa ogolaansho aan u isticmaalno xog kala duwan iyo waxyaabo taleefanno ah, laga soo bilaabo liiska xiriirka illaa GPS-ka. Had iyo goor way wanaagsan tahay in la ogaado barnaamijyadee helitaan ku leh xogta noocee ah. Waad ka hubin kartaa qaybtan Nidaamyada> Qarsoodiga, markaa ma jiri doonto wax la yaab leh.